Tag: software kuraira | Martech Zone
Tag: software kuraira
Software Ongorora, Zano, Kuenzanisa, Uye Discovery Sites (65 Zviwanikwa)
China, Kurume 11, 2021 Chitatu, June 2, 2021 Douglas Karr
Vanhu vashoma vanonetseka kuti ndingawana sei huwandu hwakawanda hwekutengesa uye kushambadzira tekinoroji mapuratifomu uye zvishandiso kunze uko izvo zvavakanga vasati vanzwa nezvazvo, kana izvo zvinogona kunge zviri beta. Kunze kwezveruzivo randakamisa, pane zviwanikwa zvihombe kunze uko zvekutsvaga maturusi. Ini ndanga ndichangobva kugovera runyorwa rwangu naMateu Gonzales uye akagovana mashoma ake aanofarira uye zvakanditangisa kutanga
Vatengesi Vakaita Sei Iwe Kusarudza Yekushambadzira Yekushandisa Provider?
Svondo, Gunyana 28, 2014 Douglas Karr
Isu takanyora nezve kusanzwisisika kwekunzwisisa kwakatenderedza izvo zvekushambadzira otomatiki, uye takagovana zvimwe zveB2B zvinonetsa mumusika wekushambadzira weinjiniya. Iyi infographic kubva kunaMarketo, uyo akabatana neSoftware Advice, akagovana iyi infographic kwavakabatanidza mhedzisiro yemazana emakambani kuti vaone kuti chii chinotyaira masangano kutenga zvigadzirwa zvekushambadzira. Wanga uchiziva here kuti 91% yevatengi vari kuongorora kushambadzira otomatiki kekutanga? Izvi hazvina kutishamisa,
Kiyi Zviwanikwa paMashambadziro Anogonesa Sei Zvemukati Zvemukati
Chitatu, July 9, 2014 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Software Advice yakabatana neAdobe kugadzira yekutanga-yakamboitika Social Media Zvemukati Optimization Ongororo. Zviwanikwa zvakakosha zvinosanganisira: Vazhinji vashambadzi (84 muzana) vanogara vachitumira pane angangoita matatu enhau enhau, ne70 muzana vachitumira kamwe chete pazuva. Vashambadziri vanowanzo taura kushandiswa kwezvinoonekwa zvemukati, ma hashtag uye mazita evashandisi senzira dzakakosha dzekugadzirisa zvemagariro enhau. Vanopfuura hafu (57 muzana) vanoshandisa maturusi esoftware kubata kutumira, uye vakapindura vakasangana nematambudziko mashoma
Maitiro Ekutanga Ongororo Anoshandura Sei Mabhiza kuva maindasitiri Vatungamiriri
China, December 5, 2013 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Vashambadziri vatendeukira kune zvemukati kushambadzira, zvemagariro midhiya, chizvarwa kushambadzira uye gumi nemaviri emamwe marongero ekushambadzira ekuvaka hukama nevanovavarira vateereri. Nyanzvi dzekutengesa dzinogara dzichitsvaga matekinoroji matsva uye marongero ekuvaka masimba avo uye kuzivikanwa. Imwe nzira yakasarudzika iyo makambani akati wandei ari kuratidza chinzvimbo chavo sevatungamiriri veindasitiri iri nekugadzira yakasarudzika yekutanga research iyo iri mbiri inovimbika uye inobatsira kune vaverengi vavo Kwekutanga Musika Kutsvagisa Tsanangudzo: Ruzivo runouya